Uyazenyeza ngokungawashayi amagoli umgadli weChippa u-Eva Nga - Impempe
OweRichards Bay uthembisa ukuthi ngeke badayise ngesitifiketi
Uyazenyeza ngokungawashayi amagoli umgadli weChippa u-Eva Nga
February 5, 2021 Impempe.com
Umgadli weChippa United, uBienvenu Eva Nga, onamahloni ngokungakori kwakhe
Umsebenzi womgadli uwodwa enkundleni – ukushaya amagoli ukuze iqembu liwine imidlalo. Yingakho nje umgadli weChippa United odabuka eCameroon, uBienvenu Eva Nga ezenyeza njengoba esahluleka ukubhakuzisa inethi.
Emidlalweni engu-11 aseyidlalile kule sizini, u-Eva Nga unamagoli amathathu nje vo, okuyinto athi ayimlalisi kahle ebusuku ngoba uyazi kumele ngabe wenza kangcono kunalokhu.
“Ngiphatheke kabuhlungu ngoba akulula ukuba kulezi simo, ngingumgadli kumele ngabe ngiyakora,” kusho le mdlali oneminyaka engu-27, noseke wadlala kwiCosta do Sol yaseMozambique.
“Nokho okungenza ngizizwe kangconywana wukuthi noma ngingakoranga mina kodwa ngiyasiza ukuthi ozakwethu bashaye amagoli, okusho ukuthi kukhona engikwenzayo uma ngisenkundleni,” kuqhuba u-Eva Nga, ofikele kwiBidvest Wits kuleli ngesizini edlule.
Uthe sebeyilibele inyakanyaka eyenzeka emdlalweni wabo odlule ababebhekene kuwo neMamelodi Sundowns la bevele bashaya into ephansi ngendlela edumazayo.
Kwakungathi akuyona nhlobo iChilli Boys kaDan Malesela eyaziwa ngokuzimisela nokudlala ibhola elihehayo, ikakhulukazi uma ibhekene namaqembu amakhulu aseGauteng.
“Saziphoxa laphayana. Ngadumala ngendlela engadlala ngayo kodwa ozakwethu bazama, benza kahle. Isimo sasingesihle ngoba lalina. Engingakusho wukuthi ozakwethu bazama futhi akubanga kubi kakhulu,” kuchaza u-Eva Nga.
Uthe manje amehlo abo manje asebheke kwiFree State Stars abazogadulisana nayo emdlalweni olandelayo okungoweNedbank Cup. Lo mdlalo uzoba ngowokuqala iChippa ezowudlalela ekhaya, eNelson Mandela Bay Stadium kusukela ngoNovemba.
“INedbank Cup yindebe ebaluleke kakhulu eNingizimu Afrika. Awucabange isiwinwe yiChippa… Okusho ukuthi singadlala kwiCAF Confederations Cup ngesizini ezayo okungaba yinto enhle engasipha amava ngoba singabe sidlala namaqembu akwamanye amazwe.
“Kungaba yinselelo enhle leyo kithi njengoba kwenzeka nje nakwiBloemfontein Celtic esihlale ihambela amazwe ehlukene,” kusho u-Eva Nga
Previous Previous post: ‘Yisiqalo sezinto ezinhle kwiTshakhuma lesi,’ kusho uMasutha ngemuva kokuchiliza iSuperSport
Next Next post: ‘UMadisha ubefana nomfowethu eselamana naye,’ kusho uMorena weSundowns